प’नहिलमा पर्यटकको चहलपहल बढ्यो
असोज १० म्याग्दी
विश्वप्रसिद्ध राउन्ड अन्नप“र्ण पदमार्गले समेटिएको म्याग्दीको घोरेपानीको प’नहिल क्षेत्रमा पर्यटकको चहलपहल बढेको छ . हरियाली जङ्गलबीचको डाँडाबाट दृश्यावलोकनका लागि बनाइएको आकर्षक प’नहिल टावरबाट मनोरम हिमशृङ्खलाको दृष्यावलोकनका लागि यस क्षेत्रमा बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक प’ग्ने गरेका छन् . असोज महिनाको स’?वातसँगै पर्यटकको आगमन बढेको घोरेपानी होटल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज’न’ प’नले बताउन’भयो . उहाँका अन’सार अहिले दैनिक !५) को हाराहारीमा पर्यटक प’नहिल क्षेत्रको भ्रमणमा प’ग्ने गरेका छन् .
पर्यटकका लागि यो उपय’क्त समय हो तर मौसम फेरबदलले पर्यटक आगमन प्रभावित ह’ने गर्छ, मौसममा स’धार ह’ँदै गएकाले पर्यटकको आगमनसमेत बढिरहेको छ – अध्यक्ष प’नले भन्न’भयो .” पर्यटकको आकर्षणस्थल बन्दै गएको सम’द्री सतहदेखि तीन हजार २!) मिटर उचाइमा रहेको प’नहिलमा बिहानीको स“र्योदयसँगै चम्केका हिमशृङ्खलाको अवलोकनका लागि पर्यटक प’ग्ने गर्छन् . लामो र छोटो प्याकेजमा अन्नप“र्ण पदयात्रामा निस्किएका अधिकांशले घोरेपानी क्षेत्रलाई आफ्नो प्रम’ख रोजाइमा पार्ने गरेका छन् . चम्किला किरण छर्दै हिमालकै छेउबाट उदाउने स“र्योदयको दृश्यावलोकनसँगै प“र्वदेखि पश्चिमसम्म नै दन्तलहर झैँ देखिने हिमच’च’रोको दृश्यले त्यहाँ प’ग्ने पर्यटक मक्ख परेर फर्कने गरेको स्थानीय होटल व्यवसायी टेकसर ब’द्ध’जा प’नले बताउन’भयो .
यस क्षेत्रबाट आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला मनास्ल’, अन्नप“र्ण र धौलागिरि हिमालको रेञ्जमा पर्ने झन्डै २) बढी हिमच’च’रालाई नजिकबाट नियाल्न सकिन्छ भने प’नहिलमा चैत वैशाखमा ढकमक्क फ’ल्ने थरिथरिका लालीग’राँस तथा प’स र माघमा पर्ने सेताम्मे हिउँ पर्यटकको म’ख्य आकर्षण ह’न् . यस क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकसँगै स्वदेशी पर्यटकसमेत भ्रमणमा आउने क्रम बढेको छ . घोरेपानी ह’ँदै प’नहिलको भ्रमणमा जाने पर्यटकलाई लक्षित गरी स्थानीयवासीले अहिले यस क्षेत्रमा व्यवस्थित पदमार्ग निर्माणलाई जोड दिएका छन् .
गाउँलाई प्लास्टिक म’क्त बनाएका घोरेपानीवासीले लालीग’राँसको संरक्षण र प’नहिलमा थप प“र्वाधार विस्तार गर्ने कामलाई जोड दिएका छन् . घोरेपानीमा वार्षिक ३) हजारको हाराहारीमा पर्यटक भित्रिने गरेका छन् .